Mugovera, Kukadzi 13, 2016 Local time: 19:06
Munda wechibagexMunda wechibage
HARARE— Britain neAustralia dzapa mari inoita madhora mamiriyoni gumi nerimwe nechidimbu yekubatsira varimi vekumaruwa kuitira kuti vatenge mbeu nezvimwe zvinodiwa. Mari iyi yapihwa pasi pechirongwa chesangano rinoona nezvekusimudzirwa kwechikafu pasi rose, reFood and Agricultural Organisation, kana kuti FAO.
Munyori mubazi rezvekurima, VaNgoni Masoka, vatenda chirongwa ichi vachiti chichabatsira zvirongwa zvebazi ravo zvekusimudzira mabasa ekurima. FAO ndiyo ichaona kuti chirongwa ichi chichafamba sei. Varimi vanotarisirwa kutanga kuwana rubatsiro pakati paGumiguru.